Greenhouse gadziriro yemwaka mutsva | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Iyi ndiyo nhanho yekutanga uye yakakosha, pasina zviito zvinotevera zvinongoita zvisina musoro. Naizvozvo, iyo greenhouse inofanira kucheneswa kwazvo. Kutanga iwe unofanirwa kutora marara ese: makapu, mabhegi embeu, tambo, nezvimwe. Yese marara yegreenhouse inofanira kupiswa, sezvo ichigona kunge iine fungus spores uye hutachiona hwehutachiona. Mushure mekukohwa, iyo greenhouse inofanira kunge isina chinhu zvachose.
Mushure mekukohwa, zvakakosha kugeza greenhouse zvakanaka pamativi ese. Kutanga iwe unoda kushambidza kunze. Mhinduro yakapusa yesipo yakakodzera izvi. Kana iyo greenhouse yakasimba, saka mushure mekushambidza chimiro chinogona kushambidzwa nehosi, sezvo izvi zvisingatore nguva yakawanda. Iko mukati megreenhouse kunoda kusukwa zvakanyanya. Kutanga, zvese zvinoshambidzwa nemvura inodziya ine sipo. Kunyanya kutariswa kunofanirwa kubhadharwa kumakona nemajoini eiyo furemu, nekuti iri munzvimbo idzi ndipo panoungana hutachiona hwakawanda.
Kana mushure menguva yechando chero zvivakwa zvemukati kana machira zvakuvara, zvakakosha kubvisa hurema hwese. Zvikasadaro, iyo greenhouse haizoite mabasa ayo zvizere. Uye zvakare, zvinongova nenjodzi kune hutano uye hupenyu, nekuti furemu yakakuvara inogona kudonha.
Girinhi yakagadziridzwa uye yakashambidzwa inogona kuiswa utachiona. Kutanga iwe unoda kumwaya furemu uye wozodurura ivhu. Iyo furemu inogona kurapwa nemhinduro yakasimba ye potassium permanganate kana mhangura sulphate. Iyi disinfection ichauraya fungal spores, mabhakitiriya uye hutachiona. Ivhu rinogona kudururwa neinofashaira turpentine mhinduro. 1 mukombe weTurpentine inofanira kusanganiswa mu10 litita emvura inopisa uye nekukasira kudurura ivhu mugreenhouse. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kugadzirisa kwakadai kunofanirwa kuitwa pasati papfuura mavhiki maviri usati wadyara.
Mazuva mashoma usati wadyara zvirimwa, zvakakosha kuti unyatsogadzirira ivhu. Mafetiraiza anoda kuiswa ivhu. Inogona kunge iri organic kana mamineral fotereza. Zvirinani kusarudza madota kana kusasimba kusaputira manyowa kubva ku organic fetiraiza. Kubva kune fetiraiza emamineral, iwe unofanirwa kusarudza potasium-nitrogen yakaoma kana yakaoma multicomponent kugadzirira. Mineral fotereza inofanira kusanganiswa zvinoenderana nemirairo. Zvirinani kuisa zvishoma pane zvakawanda.
Mushure mekuisa fetiraiza, zvakakosha kuchera ivhu zvakanaka, kuputsa mapundu. Wobva waenzanisa ivhu nehara. Zvese! Iyo greenhouse yakagadzirira mwaka mutsva.
DIY polycarbonate dome girinihausi
Ita-it-pachako greenhouse "chingwa bhokisi". Dhirowa, mapikicha
Nzira yekubata sei polycarbonate greenhouse muchirimo?
Mibvunzo ye63 mu database yakagadzirwa mu 0,447 masekondi.